बिना मगर – Pahilo Page
विदेश जान नपाएर आगो बनेका सहसचिवद्वारा मन्त्रीमाथि यस्तो लाञ्छना
काठमाडौं, ८ माघ । विदेश भ्रमणमा जान नपाएपछि आगो बनेका सरकारका सहसचिव राजनराज पाण्डेले खानेपानी मन्त्री बिना मगरलाई विभिन्न लाञ्छना लगाएर प्रचारबाजीमा हिडेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव गुणराज श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विदेश भ्रमण सम्बन्धी फाइल मन्त्रीज्यूले स्वीकृत नगरिदिएपछि मन्त्रीलाई विभिन्न ला...
हाम्रो संस्कृति र एकताबाट अरु मुलुकले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ : खानेपानी मन्त्री मगर
कञ्चनपुर, १० पुस । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले गणतन्त्र नेपाल र धर्म निरपेक्ष मुलुक बनाउन सारा नेपालीले त्याग र बलिदान गरेको बताएकी छन् । त्यही कारणले यसलाई संस्थागत गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । क्रिसमस दिनको अवसरमा कञ्चनपुरको बेलौरीमा आयोजना गरिएको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मगरले जनताको ठू...
काठमाडौं, २७ मंसिर । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले विकेन्द्रित भइरहेको समाजलाई केन्द्रीकृत गर्न सहकारी संस्थाहरुले ठूलो योगदान दिइरहेको बताएकी छन् । कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा अवस्थित दलित बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको २१ औं वार्षिक साधारणसभाको उदघाटन गर्दै मन्त्री मगरले समाजलाई केन्द्रीकृत गरी सहकारी संस्थाहरुले सक...
काठमाडौं, २७ मंसिर । खानेपानी मन्त्री बिना मगर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणमा जुटेकी छन् । मन्त्री मगरले कञ्चनपुरको बेलौरीमा सञ्चालित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको सहयोगार्थ १ लाख १ हजार १ सय रुपैंया आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेकी छन् । सरस्वती माध्यमिक विद्यालयलाई सुविधासम्पन्न स्मार्ट विद्यालय बनाउने उद्दे...
काठमाडौं, २६ मंसिर । कञ्चनपुरको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को प्रगतिशील महिला समूहका महिला प्रतिनिधिहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले स्यानिटेशन प्याड बनाउने तालिम सुरु भएको छ । महिलाहरु महिनावारी हुँदा प्रयोग हुने स्यानिटेशन प्याड बनाउने तालिम बुधबारबाट सुरु भएको हो । व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रको सहयोग...
खानेपानी मन्त्रालयको पहलमा यस्तो बन्दैछ २ वर्षमा जनकपुरधाम [भिडियोसहित]
काठमाडौं, २२ मंसिर । प्रदेश नं. २ को राजधानी जनकपुर अबको दुई वर्षमा सफा सुग्घर र रमणीय हुने भएको छ । धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा प्रसिद्धि कमाएको जनकपुरको स्वरुपमा अबको दुई वर्षमा कालापलट हुन लागेको हो । जनकपुरको अहिलेको स्वरुप परिवर्तन गर्नका लागि जनकपुरधाम सरसफाई तथा पोखरी सम्बद्र्धन आयोजना अघि बढाउने सम्झौता...
खानेपानी मन्त्री बिना मगर अचानक किन पुगिन् दोलखा ?
काठमाडौं, ८ मंसिर । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि राष्ट्रिय संकल्प र एकरुपता अनिवार्य आवश्यकता भएको बताएकी छन् । रिनेजम नेपालले दोलखाले चरिकोटमा आयोजना गरेको प्रथम प्रकाश स्मृति कप फुटबल प्रतियोगिता कार्यक्रमको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्न मन्त्री मगर दोलखा पुगेकी हुन् । समापन समारोहलाई...
योजना छनौट गर्दा खानेपानी मन्त्री बिना मगरले देखाइन् यस्तो फरक शैली
काठमाडौं, २ मंसिर । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको ४ करोड रुपैयाँको योजना छनौटमा फरक शैली अपनाएकी छन् । उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका २ नगरपालिका र २ गाउँपालिकामा समानरुपमा प्रत्येक स्थानीय तहलाई १ करोड पर्ने गरी योजना छनौट गरेकी हुन् । मन्त्री मगरले सबै स्थानीय तहमा अन्...
गाडी मेलम्चीका, प्रयोग अरुतिरै, तत्काल फिर्ता ल्याउन मन्त्री मगरको निर्देशन
काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री बीना मगरले अन्यत्र प्रयोग भइरहेको मेलम्ची आयोजनाका गाडीहरु तत्काल फिर्ता ल्याउन मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई निर्देशन दिएकी छन् । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका नाउँमा रहेका विभिन्न गाडीहरु अन्यत्र प्रयोग भइरहेको भन्ने विषय सार्वजनिक भएपछि मन्त्री मगरले बाहिर प्रयोग भइरहेका गाडी फिर्ता...
काठमाडौं, २४ असोज । खानेपानी मन्त्रालयले देशभरिबाट प्राप्त गरेको खानेपानी सम्बन्धी समस्या तथा गुनासोहरुको सम्बोधन गर्न एक विशेष कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरको नेतृत्वमा बुधबार बसेको बैठकले खानेपानी सम्बन्धी देशैभरिबाट प्राप्त भएका गुनासा तथा मागहरुको सम्बोधन गर्न ६ सदस्यीय कार्यदल गठन ग...